यो खेल निरन्तर चलिरहेको छ पर्दा भित्र - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » यो खेल निरन्तर चलिरहेको छ पर्दा भित्र
यो खेल निरन्तर चलिरहेको छ पर्दा भित्र
त्यो साँझ छिमेकका केटाकेटीहरुले भर्खर ख्रीष्टमस क्यारोल गाउन थालिरहेका थिए। चौबिस डिसेम्बरको साँझ थियो त्यो। भोली ख्रीष्टमस पर्व थियो। हिन्दू,बौद्ध र अन्य बिभिन्न धर्मका रीतिले रित्याएर अनि थितीले थिचेर आर्थिक भार थाम्न नसकेर ख्रीष्ट वा यॆशूको पछि लाग्ने र चर्च धाउने मानिसहरुको संख्या गोबरमा उम्रेको च्याउ झैँ हलक्क बढिरहेको थियो त्यतिबेला। अझ विदेशी चर्चहरुले सित्तैमा पठाईदिने नाना र बेला बेलामा चर्चले दिने मिठो खाना पाएपछि को जावोस ओम आराध्य देवो गणपति मन्त्र गाउँदै चिसो पानीमा पशुपति तिर।
मेरो छिमेकमा नि एउटा चर्चको साईन बोर्ड झुण्डिएको छ। बाहुन श्रीमान र राईनी श्रीमतीले चलाएको त्यो चर्चको घरको लालपुर्जा भने व्यक्तिगत रुपमा तिनै बूढाबूढीको नाममा भएको हल्ला नचलेको हैन। मलाई त्यसमा खास चासो थिएन। त्यहाँ आउने विश्वासीहरुले उनीहरुलाई गुरु बा र गुरु आमा भनेर “जैमोसी” भन्दै अभिवादन गर्दथे। त्यसको अर्थ पनि मलाई थाहा थिएन।
चासो त मलाई तिनै पोटिली गुरु आमाको चाकमा कहिले छुन पाईएला भन्ने थियो। हेर्दै नमिलेको जोडी थियो उनीहरुको। बूढा त्यस्तै पाँच बर्ष जति जेठो हुनु पर्दछ उनी भन्दा। कपडा पनि ल्याङफ्याङ लगाउँथ्यो उसले। बूढी चै भने सधै टिप टप भएर हिँड्थी।
ख्रीष्टमस अथवा उनीहरुको भनाईमा यॆशू जन्मेको दिन भएकोले मलाई नि निम्तो दिन आए बूढाबूढी । गएँ। सबैले भजन गाउँदै थिए। गुरुमा चाक हल्लाई हल्लाई जोसिँदै थिई। इमान्दारितासाथ भन्नु पर्दछ। ढाँट कुरा गर्नु हुन्न। त्यो गीत भजन नसकिउन्जेल पनि मेरो नजर पुरै त्यही गुरुमाको अंग अवयव हेर्दैमा बितेको थियो।
त्यस पछि सबैले प्रार्थना गर्न थाले। मैले नि मुन्टो निहुराएँ। तिनै गुरुमाले मेरो शीरमा हात राखेर के के बर्बराएर प्रार्थना गरिन थाहै भएन।मेरो भने लिङ्ग ठनक्क ठन्किसकेको थियो। अर्को दिन म बिरामी पो भएँ। चर्चमा आऊनू भनेको थियो। जानाजान गयल भैदिएँ। केही बेर पछि गुरुबा र गुरुमा मेरो कोठामा आए। प्रार्थना गरिदिए। म पनि निको भएको स्वाङ गर्दै जुरुक्क उठेँ। यसरी चर्चसित मेरो सम्बन्ध गाँसियो। केही महिना पछि मैले उनलाई एक्लै सागबारीमा काम गरिरहेको देखेँ। अनि मौकामा चौका हान्दै भनेँ,” जैमोसी बैनी!”किन एक्लै काम गर्नु भएको ?ज्वाई खै त?”
“जैमोसी डाई! ज्वाई हुनुहुन्न।ज्वाईको त फिलिपिन्सको भिसा लाग्यो। अब ख्रीष्टमसमा मात्र आउनुहुन्छ।
” आबुई हो र? यस्ती खाईलाग्दी बैनीलाई साथै नलगेर निष्ठूरी ज्वाई पनि!”मैले उसको नाडी छाम्न कोशिस गरेँ।
” स्कोलरशिप हो डाई,परिवार लान मिल्दैना रे!”उसले अलि असहज महसुस गर्दै भनि। ” यो साग गोडी सकेपछि प्रार्थना गर्दिन पल्ला घरे माईलीकोमा जानु पर्दछ” उसले भनि।
” मेरोमा पनि प्रार्थना गर्न आई दिनु न आज बेल्का” मैले तिर हानेँ।
“सारै अबेर त हुन्न तर कोशिस गर्दछु डाई,सासुले थाहा पाई भने ज्वाईको कान भर्दिन्छिन्।”
“सुटुक्क आउनु नि बैनी,किन हुल बाँधेर आउनु पर्यो?”
“हस कोशिस गर्छु” मसित नयन मिलान गर्दै उसले भनि।
त्यस्तै साढे आठ बजेतिर मेरो ढोका टक टक गर्यो। खोलेर हेर्दा गुरुमा हाजिर थिई।
मेरो बेड र किचेन एकै ठाउँमा भएकोले बेडैमा बसि। मैले उसलाई चिया बनाईदिन ग्याँस चुल्हो बाल्न खातबाट ओर्लेँ। मै बनाउँछु डाई भन्दै उसले मतिर चाक पार्दै चुलोमा काम गर्न थालि। च्याप्पै समाएर चिकि हाल्नु भएन। मन नलागेको त कहाँ हो र? दुवैले चिया खायौँ।
उनले प्लाष्टर नगरेको मेरो कोठाको चारैतर्फ आँखा डुलाई। कुनामा हिजो हस्त मैथुन गर्दा लाएको कण्डम त्यहि ईँटमा झुण्डिएको रहेछ। किन गर्नु भएको डाई ? उसले सोधी। जाडोले कुर्रकुर काम्दै थिई। पातलो सुईटर र सल अनि त्यस भित्र पातलै बाह्र हाते सारीमा ऊ परि जस्तै देखिन्थि। मैले इमान्दार जवाफ दिएँ,” भाउजु ल्याउन सकिन। सित्तैमा मिल्दैन। आनन्दको लागि हस्त मैथुन गरेको हुँ।”
” शरीरलाई दुख दिएर आनन्द लिनु हुन्न।” उसले भनि।
“के गर्नु पर्दछ त?”मैले सोधेँ।
उसले भनि,” प्रार्थना ”
त्यसो भा तिमी र ज्वाईले ” प्रार्थना” मात्रै गर्दछौ हो?
उसले जवाफ दिन आनाकानी गरि।
” प्रार्थना बाहेक यौन सम्पर्क पनि गर्दछौ। ” उसले निसंकोच भनि।
“एक दम आनन्द आउँछ होला हैन?” मैले तिर हानेँ।
” औपचारिकता मात्र हो डाई,ज्वाईलाई सुगर छ।य़ेसूको नाउँमा जति डाँटे पनि त्यो शैतानले उहाँलाई छॊड्दै छोडेन डाई। उहाँले मलाई पाँच मिनेट सेक्स गर्न सक्नु हुन्न।”
बेला यहि हो भनेर मैले ढोकाको चुकुल लगाएँ र बत्ति निभाएँ। सुन्तलाको बोक्रा छोडाए झैँ उसको कपडा छोडाउनु अघि एकपल्ट उसलाई प्रस्ताव गरेँ,
” बैनी तिमी मेरो तेह्र दिने पनि होईनौ। एकदम प्यास लागेको छ भने अबदेखि म तिम्रो रहर पुग्ने गरि तिमीलाई सेक्स गर्दछु। कसैलाई नभन है त?”
“तपाई आफै भन्नु हुन्छ कि रक्सी खाएको बेलामा?” उसले सोधी। शँका लाग्नु स्वभाविक हो।
मैले तिम्रो घर बिगार्न होईन सपार्न यो प्रस्ताव गरेको हुँ। जब हस्ते हानेर चित्त बुझाउने मान्छे ले नियमित तिमी जस्ती अप्सरालाई गर्न पाउँछ भने म कसरी भन्छु अरुलाई?”
“बच्चा बस्दछ कि?” बच्चा बसेमा ज्वाईले शँका ……
केही हुन्न भन्न्दै मैले पुन: बत्ति बालेँ:। उसैको अघि सर्वाङग नाङ्गो भएर एउटा कण्डम लगाएँ। उसलाई पनि आफ्नो कपडा उतार्न ईसारा गरेँ। कपडा उतार्न मरे मानिन मोरीले ।
“सारी उल्टाईदिन्छु,त्यसैमा गर्नुस।प्यान्टी भने झिक्छु “भनि।
मैले पनि हुन्छ भने र सारी फर्लक्क पल्टाउन लाएर उसलाई बिस्तारै सेक्स गर्न शुरु गरेँ।
उसको कुपु चुमुकचुमुक गरिरहेको थियो। आठ दश धक्का हाने पछि ऊ रुन थाली। किन रोएकि भनेर मैले सँझाउन थालेँ। उसले कारण खुलाई। अहिले सम्म उसलाई उसको श्रीमानले यसरी धीत मरुन्जेल कहिल्यै चिकेको रहेनछ।त्यो आँसु खुशीको रहेछ। उसले भनि,” अझै हान्नुस डाई! अझै जोडले गर्नुस।”
यसरी मैले त्यो साँझ ती गुरु आमालाई पाँच पटक सन्तुष्ट हुने गरि चिकेँ र हाम्रो दाजु बैनीको पर्दा भित्र यो खेल निरन्तर चलिरहेको छ।ज्वाई विदेशमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने म उनको टाढाको जेठानले उनको बूढीको पुति लाई दिनमा दुईदेखि पाँच चोट चिकेर ठेगान लाउने काम पाएको छु।
(Visited 188 times,6visits today)
मेरो ध्यान बहिनीको फिगरमा थियो, अनि उसको सेन्ट
नन्दको बुढाले मेरो पुति चिकेको रात